လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ရေးခဲ့တာလေးပါ ကွက်တိပါပဲဗျာ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeလွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ရေးခဲ့တာလေးပါ ကွက်တိပါပဲဗျာ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ရေးခဲ့တာလေးပါ ကွက်တိပါပဲဗျာ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ရေးခဲ့တာလေးပါ
ကွက်တိပါပဲဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့…၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလကို…မျှော်မှန်းကြည့်ခြင်း…
ကျွန်တော်တို့…ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ မြင်ဘူးတဲ့…အကြမ်းဖက်သမားတွေ…က… ဓားစာခံတွေကို…အကြောင်းအရာ တခုခုနဲ့…ထိန်းချုပ်စေခိုင်းတတ်ကြတာကို…သတိရမိပါတယ်…
ဓားစာခံဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာ…သူတို့ နောက်ကျောကို ထောက်ထားတဲ့..ဒါး…သေနတ် တွေနဲ့ ရန်ပြုခံ ရမှာကိုစိုးရိမ်ရလို့သော၎င်း….ဓါးစာခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားသူ တဦးဦး…အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်အတွက်၎င်း အများကို…ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်…ဘာမှဖြစ်မနေသလို..မျက်နှာပေးနဲ့…ဘာမှအန္တရာယ်မရှိသလို လေသံနဲ့….. တယ်လီဖုန်းတွေပြန်ဖြေနေတာ…ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ…ပြောပေးနေတာကို တွေ့ဘူးကြမှာပါ….
အင်း….၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်ကာလမှာ…စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို… ဓါးစာခံအဖြစ်…သုံးလာနိုင်တယ်လို့…စဉ်းစားမိလို့ပါ…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့…ဗိုလ်ချုပ်တွေ…ကျိတ်ပြီး သဘောတူညီမှုရသွားလို့….ဗိုလ်ချုပ်တွေက… ယုံကြည်သွားကြပြီးတော့…အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ…လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ…လွတ်လွတ် ကျွတ်ကျွတ်…ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ….စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက…၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သလိုမျိုး…မလုပ်တော့ဘဲ…တိုင်းပြည်ကို ဓားစာခံအဖြစ်ထားပြီး… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့…သူ့အစိုးရအဖွဲ့ကို…UN တို့… ICC တို့….US ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်အုပ်စု တို့ OIC အဖွဲ့အစည်းတို့က…တိုက်ခိုက်လာမှုတွေကို…အကာအကွယ်လုပ်ဖို့…လူသားဒိုင်းကာအဖြစ်.. အသုံးပြုလာနိုင်ပါတယ်….
ဗိုလ်ချုပ်တွေက…သူမနဲ့…သူမအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို…နိုင်ငံတကာကို…ရုပ်ပြအဖြစ်စေလွှတ်ပြီးတော့… နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရှောင်လွဲနိုင်အောင်…နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေ…ချေးငွေတွေရရှိ အောင် …နိုင်ငံတကာ ရင်နှီးမြှုတ်နှံမှုတွေရရှိအောင်…အသုံးချလာနိုင်ပါတယ်…
တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့…အရေးပါတဲ့ရာထူးတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့…ကာချုပ်တို့… ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတို့….နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတို့ကိုတော့…စစ်တပ်ကဘဲ..ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားကြ မှာပါ…တိုင်းပြည်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာက…ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာဘဲ..ရှိနေမှာ ဖြစ်သလို…လွှတ်တော်၂ရပ်စလုံးဟာလဲ…တမတ်သားတွေနဲ့…ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်တွေကို..လွန်ဆန်ပြီး… ဘာမှ လုပ်နိုင်ဖွယ်ရာ…မမြင်ပါဘူး….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့…လက်ရှိပြောနေကျစကားဖြစ်တဲ့…”ကျွန်မမှာ…အာဏာမရှိသေးလို့… ဘာမှ..လုပ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး”…ဆိုတဲ့..စကားနေရာမှာ…”နိုင်ငံတခု တည်ဆောက်ရေးဆိုတာ …အချိန် ပေးရမယ်”….တို့…”ဖြည်းဖြည်းနဲ့…မှန်မှန်..ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားရမယ် “…တို့… “အခု..ရေတွင်း တူး…အခု …ရေကြည်သောက်ချင်လို့…မရနိုင်ဘူး”…တို့…”အာဃာတတွေ…မထားကြ နဲ့”… တို့…”ကလဲစား မချေရေး”…တို့…”အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး”…တို့..ကို ပြောင်းလဲပြောဆိုပြီး …ပြည်သူကို… ပျားရည်နဲ့ …ဝမ်းချထားပါလိမ့်မယ်…
သူမဟာ…အစ္စလာမ်တွေအပေါ်…ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ…အမုန်းစကားပြောကြားနေတာတွေကို… ဆက်ပြီး…လစ်လျူရှုထားပါလိမ့်မယ်…မဘသ…တွေကိုသာမက…စွမ်းအားရှင်တွေကိုပါ…မျက်ကမ်း မျိုးချစ်..ရာဇဝတ်မှုတွေလုပ်နေတာကို…မသိချင်ယောင်ဆောင်…မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး…ခွင့်ပြုထားပါလိမ့်မယ်…
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့…ယာယီကဒ်ပြား…ယာယီ အစီအစဉ်တွေနဲ့ဘဲ…နပမ်းလုံး…ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်ဇာတ်လမ်းတွေ…တမျိုးပြီး..တမျိုး..ဆင်ပြီးတော့…တိုးတက်မှုမရှိတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးထားပါလိမ့်မယ်….
တိုင်ရင်းသား…လူနည်းစုတွေအတွက်တော့….ဖက်ဒရယ်ယူနီယံကြီးအကြောင်းပြော..ပြောပြီးတော့… စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်…ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး…ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ… အဓွန့်ရှည်နေဦးတော့မှာပါဘဲ….အသက်မပါတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲကြီးတွေနဲ့ ပေါ့……
(ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ်ကိုကြီး…ဒေါက်တာကိုကိုကြီး၏ အိုင်ဒီယာကို…ထပ်ဆင့်ခံစား တင်ပြတာပါ)
← ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ-၂၆ ဆိုသည်မှာ
မောင်အောင်မွန် အပြန်တရာခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် →